Akhriso: Xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha oo loo diray warqad cabasho ah - Awdinle Online
Akhriso: Xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha oo loo diray warqad cabasho ah
May 3, 2020 (Awdinle Online) –Qareen Daahir Maxamed Cali oo ah qareen u dooda hay’adaha warbaahineed ee gaarka loo leeyahay iyo ururada saxaafadda ayaa waxa uu warqad cabasho ah u diray madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha iyo ra’isulwasaaraha.
Cabashada qareenkaan ayaa ku qotonta tacadiyo kala duwan oo loo geysto saxaafadda xorta ah.
Qareen Daahir ayaa sidoo kale cabashadiisa ku daray inaysan badqab uu haysto wariyaha iyo in laga gaabiyo difaaciisa waxa uuna xusay in saxaafadda xorta ah ay ka cabanayso helidda xogaha dowladda oo ay helaan iyaga oo faaf reeban.
Maanta ayaa Soomaaliya waxaa laga xusay maalinta saxaafadda adduunka oo ku began 3-da May.
Halkaan ka akhriso cabashada qareenka
Previous articleWiilkii sameeyay mishiinka neef-siinta oo Warbaahinta caalamka hadal heysa
Next articleManta oo ku beegan maalinta Saxaafadda aduunka iyo wariyaasha Soomaaliyed oo Weeraro Wajahaya